Gini mere ị ga - eji sie ike na - eme ka otu ihe nkedo ụgbọ ala TPE kpụrụ?
A na-akpọ China mgbe niile ụlọ ọrụ ụwa. Site na mmelite nke ike akụ na ụba nke China, nnukwu ikike ahịa emeela ka ahịa ndị China nwee anya maka ụdị mba ụwa. Companieslọ ọrụ mba dị iche iche na ụdị mba dị iche iche agbagala n'ahịa ndị China wee bulie ụlọ ọrụ ụgbọ ala China. Na mmepe nke onunu ụlọ ọrụ, na World Factory Auto Network accommodates iche nke Chinese akpaaka ngwaahịa. China aburula ebe ezukọta maka inweta ugbo ala zuru oke ma buruzie isi ebe ndi ahia ahia nke mba uwa.
Site na nkwalite nke oriri akpaaka, ahịa ahịa akpaaka chọkwara ọgbọ ọhụụ nke ngwaahịa ịgbaso. Anyị webatara ihe eji akpụ akpụ akpụ ụkwụ gburugburu ebe obibi, ma mụọ ndị uwe ojii ụgbọ ala TPE nke German na ndị Ọstrịa, na-ewetara ndị nwe ụgbọ ala ahụike na ahụike dị nchebe karị!
Nke mbụ, ka anyị kwuo maka ọdịiche dị n’etiti usoro ịkpụzi ọgwụ na usoro nro:
1: Esemokwu dị na akụrụngwa
Usoro nkedo ogwu kwesiri ka emeputa ya na ihe 100% TPE di ocha, a na - agwakota ihe ojoo na TPO ma obu TPV dika ogige TPE, na idi ocha nke ojoo adighi nma dika ihe ogwu. Ya mere, ihe nkedo ụgbọ ala zuru ezu nke TPE ga-enwe ihe ederede na-agbanwe agbanwe, dị nso na roba, na mmetụta ụkwụ ka mma. Ngwaahịa nke teknụzụ ọnya siri ike, nke yiri plastik, ọ ga-ada mbà mgbe ha na-anya ụgbọala.
2: Ọdịiche dị ogologo oge
Ọgwụ na-akpụzi TPE ụkwụ na mpe mpe akwa nwere resilience. Mgbe ọ gbanwere na oge ikpeazụ, a ga - eweghachi ya na ọdịdị ya site na ịwụsa mmiri esi mmiri ma ọ bụ kpughee ya na anyanwụ maka oge ụfọdụ.
Nyocha DEAO car deformation: weghachite ọdịdị mbụ mgbe awa ole na ole gosipụtara.
Ngwunye ọnya ahụ ga-agbago elu mgbe afọ 1-2 gachara ma enweghị ike weghachite ya.
Ihe e ji mara ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ sitere:
Akụrụngwa nke usoro ịkpụzi ọgwụ na-agbazi n'ime igwe na ịkpụzi ya na mmiri na-egbu mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ tupu emee ya.
Usoro ọnya ahụ bụ ime ka ihe ahụ dị mbadamba dị larịị, wee kpoo ya ka ọ dị nro ma banye ya na ebu ahụ ka ọ dị jụụ ma mee ya.
Ngwaahịa nke ya na ntụtụ nwere ọdịdị nke ngwaahịa ahụ n'onwe ya, ebe ngwaahịa ahụ nwere naanị otu akụkụ nke ọdịdị a kpụrụ akpụ, na mgbake nkịtị dị obere karịa nke mbụ.
Ihe nzu eji ụgbọ ala mee.
3: Ọdịiche dị iche iche
Uru nke iji okpukpu abụọ pụrụ iche na-akpụzi akpụzi bụ na enwere ike ịmepụta ọdịdị elu karịa n'ụba, na-enye ndị na-emepụta ihe ohere.
Anyị emepụtara naanị textures maka ụdị ọ bụla, yana nkọwa dị na ọgaranya karị, ederede ọ bụla nwere patent ịme ngosi uwe n'azụ ya.
Ọkpụkpụ afụ nwere ike ịme ahịrị dị mfe, otu.
4: Ọdịiche dị na nkechi
The abụọ-oyi akwa nkechi e site ọgwụ ịkpụzi usoro bụ ihe inogide. Ejiri ala mgbatị ụkwụ dị n'okpuru ya na ndị ọzọ na-emegide nrụrụ. Nkechi a na-etinyekwa ọgwụ nkedo site na obere nkenke nkenke, nke dị ike.
Otú ọ dị, usoro ọnya ahụ dị obere. Ọ bụrụ na e mere nkụkọ nke okpukpu abụọ, ike na nkwụsi ike nke ute ụgbọ ala bụ nnukwu ule. Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara na ụgbọ ala ụgbọ ala ofesi niile na-enweghị okpukpu abụọ.
N'ikpeazụ, gịnị kpatara Deao ji esi ọnwụ na ị ga-emezi otu TPE ụgbọ ala utes?
N'ihi na DEA na-enwekarị ahụmịhe na mmepe nke ihe mbadamba ụgbọ ala mbụ! Anyị chọrọ iwetara ndị ka nwere ọtụtụ ụgbọ ala ụgbọ ala ka mma. Naanị ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụgbọ ala arụkọtara arụ ọrụ zuru ezu nke ejiri ụgbọ ala TPE zuru oke nwere ike iweta ahụmịhe gburugburu ebe obibi na ezigbo ịnya ụgbọ ala.
Post oge: Nov-24-2020